PyeongChang 2018 official app ကိုထုတ်လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Samsung! – AsiaApps
January 25, 2018 January 25, 2018 WilliamApp News / ReviewsNo Comment on PyeongChang 2018 official app ကိုထုတ်လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Samsung!
Samsung ဟာဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်နေ့ကနေ ၂၅ရက်နေ့ အထိကျင်းပမယ့် PyeongChang 2018 Winter Olympics အတွက် Official Application ထုတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ PyeongChang 2018 Winter Olympics အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်ထားတဲ့ App ဖြစ်တာကြောင့် အဓိကတွေ့မြင်နေရမှာကတော့ PyeongChang Winter Olympics နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ သတင်းအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ App အသုံးပြုမှုရဲ့ အဓိကအားသာချက်ကတော့ သတင်းအမှန်တွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်တာပါ။ ကစားသမားတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေ နဲ့ ကြားထဲမှာ ကျင်းပသွားမယ့် Event သတင်း အစရှိတာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင်ရမယ့်အချိန်စာရင်း၊ ပါဝင်မယ့်အားကစားတွေကိုလည်း တိတိကျကျဖော်ပြပေးထားပါသေးတယ်။
Samsung ဟာ PyeongChang 2018 Winter Olympics နဲ့ပတ်သက်ပြီး Galaxy Note8 ကို PyeongChang 2018 Limited Edition ဆိုပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က ထုတ်လုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ PyeongChang 2018 Winter Olympics အတွက် Edition အသစ်တစ်ခုပြီးတော့ အခုဆိုရင် Application အသစ်တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ပေးထားတာကြောင့် ပြိုင်ပွဲအတွက် Samsung ရဲ့ပံ့ပိုးမှုကတော့ထင်ရှားနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ အားကစားသတင်းတွေဖတ်ရှု့ရတာဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ Application လေးကို Download ဆွဲထားသင့်ပါတယ်။
— Mbasela (@mbasela_zm) January 24, 2018